Global Voices teny Malagasy » Bilaogera Asongadina: Ahmed Awadalla · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Oktobra 2019 4:07 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Miranah
Sokajy: Antsafa, Mediam-bahoaka, RV any ejipta
Iray amin'ireo nahazo vatsy avy amin'ny Rising Voices ny tetikasa “Exploring Taboos (Firesahana ny Fady)” , nokarakarain'ny ekipa Nazra tao Kairo. Ny tanjon'ny tetikasa dia ny hanome toerana azo antoka ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy ao Ejypta mba hiresaka momba ny olana toy ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, ny fitoviana ara-nofo, ny famorana ny vehivavy ary ireo lohahevitra fady hafa.
Efa nitatitra momba ireo atrikasa voalohany  sy ny lahatsoratra bilaogy voalohany  momba ny tetikasa firesahana fady izahay.
Nandray anjara tamin'ny atrikasa voalohan'ny tetikasa “Exploring Taboos” i Ahmed Awadalla. Mpampiofana sy mpampianatra ao amin'ny Fikambanan'ny Fampandrosoana sy ny Fandrindram-pianakaviana  (CFPDA) izy. Niorina tamin'ny taona 1967, manome fanohanana ara-teknika, ara-pitantanana ary ara-pandaminana mikasika ny tolotra fandrindram-pianakaviana sy fanabeazana ara-pahasalamana ho an'ireo fikambanana 34 mpikambana ao Ejypta ity fikambanana ity.
RV: Ahoana no nahatongavanao tamin'ny lohatenin'ny bilaogy hoe ”Rebel with a cause ”?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/15/143888/
 “Exploring Taboos (Firesahana ny Fady)”: https://mg.globalvoices.org../projects/nazra-for-feminist-studies/
 atrikasa voalohany: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2010/08/29/exploring-taboos-project-men-also-cry/
 lahatsoratra bilaogy voalohany: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2010/09/22/egypt-continuing-to-explore-the-taboos-of-sex-workers-and-machismo/
 Fikambanan'ny Fampandrosoana sy ny Fandrindram-pianakaviana: http://www.answers.com/topic/cairo-family-planning-association